China retort Factory, Retort soplaya
JINGYE Retort Sterilizer bụ arịa mechiri emechi nke na-egbu nje na-emerụ ahụ site na ọgwụgwọ okpomọkụ iji meziwanye ndụ ndụ nke nri, n'otu oge, ka o kwere mee iji chekwaa ekpomeekpo na nri.
E nwere ụdị atọ nke nke JINGYE Retort Sterilizer: mmiri ọkụ na-agba mmiri ụdị, mmiri ọkụ mikpuo ụdị na ụdị uzuoku. Anyị na-enye usoro kachasị mma maka ndị ahịa dabere na ngwaahịa ha.
Side Typedị Retdị retort
Retort Sterilizer bụ arịa mechiri emechi na-egbu nje bacteria na-emerụ ahụ site na ọgwụgwọ ikpo ọkụ iji meziwanye nri adị ndụ, n'otu oge, ka o kwere mee iji chekwaa ekpomeekpo na nri. Ọ bụ ihe dị oké mkpa ngwaọrụ maka shelf ogologo nri.
Mmiri Imikpu Retdị Retort
Spgba mmiri Typedị Typegha
Amdị Steam Retghaghachi